Ciidanka DF geysay Gedo oo bilaabay in ay hubka "ka iibsadaan" Shabaab
MUQDISHO, Soomaaliya – Qaar kamid ah askarta ay Dowladda Soomaaliya ku daad-gureysay magaalooyinka gobolka Gedo ayaa bilaabay in ay ka baxaan furimaha dagaalka, sidda uu shaaca ka qaadey sharci-dejiye.
Ciidanka, oo ah kuwa uu si gaar ah u tababaray Turkiga isla markaana ay qalabeysay Qadar, ayaa waxay la wareegeen gacan ku haynta Doolow, Luuq iyo qayb kamid ah Beledxaawo.
Jubaland, oo xiriirka kala dhaxeeya Villa Soomaaliya uusan fiicaneyn, ayaa talaabadaas ku tilmaamtay "duulaan lagu soo qaadey".
Maxamed Idiris, xubin ka tirsan Aqalka Hoose ee baarlamaanka federaalka, ayaa aaminsan "in ciidanka been loo sheegay".
Askarta ayuu ku sifeeyay "dhalinyaro la marin-habaabiyey oo qaarkood la yiri waxaa la idin qaadayaa Qadar, waxaad waardiyeyneysaa Koobka Aduunka ee ka dhacaya Qadar, oo laga dejiyey Luuq iyo Doolow".
Mudanaha ayaa tibaaxay: "Qaarkood, sidda la sheegayo, waxay hubkii ka gateen Al-Shabaab, qaarkood hubkii ka gateen meelo kale, qaarkood ay Kenya u tahriibeen, waana wax aanan la qaadan karin".
Mudanaha oo wariyeyaasha kula hadlay Muqdisho ayaa aad u dhaliilay xayiradda dhanka hawada ah oo ay dowladda Soomaaliya saartay degaanadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland.
Isagoo soo xiganaya Dastuurka, Mr Idiris ayaa talaabadaas u aqoonsaday "faquuq lagu sameeyey shacabka, maadaama xukuumadda si ola-kac ah ay u sameysay".
Madaxda ugu sareysa ee dowladda federaalka ayuu ku eedeeyeen in ay "ag-mareen" dastuurka ku meel gaarka ah ee waddanka u yaala.
"Madaxweyne Farmaajo waajibaadkiisa sidduu u cad yahay ayey xaqa muwaadiniinta Soomaaliyeed u cad-yahay, maalinteeda ayaana lagula xisaabtamayaa yuusan u qaadan sidday hadda u dhacayaan in ay u socon doonan, waqtigana waa kooban yahay," ayuu xusay.
Ugu dambeyntii, beesha caalamka ayuu cod dheer kaga dalbaday in ay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqyadda Nabad iyo Nolol iyo goobaha ay u adeegsaneyso ciidamadda loo tababaray tirtirka maleeyshiyaadka Al-Shabaab.
Weerarka ayaa waxaa la xaqiijiyey in uu ahaa is-miidaamin uu fuliyey naftii halige.
Kenya oo war kasoo saartay weeraro ay Al-Shabaab "abaabuleyso"
Afrika 05.03.2020. 20:42
Farmaajo oo loogu baaqay in uu booqdo ciidamo la weeraray
Soomaliya 20.02.2020. 07:13
Amiirka Al-Shabaab oo "eryay saraakiil dalbaday joojinta beegsiga rayidka"
Soomaliya 03.02.2020. 22:40
Abshir Gaarane Axmed: Waa kuma fanaanka Al-Shabaabka isku bedelay?
Soomaliya 21.01.2020. 22:17
Tiradda guud ee dhimashadda weerarka baska Kenya oo la shaaciyey
Afrika 06.12.2019. 22:03
Qorshaha ay Kenya kaga hortageyso in ay Al-Shabaab qorato xubno cusub
Afrika 12.11.2019. 10:06